Naftaada Jecloow nafta Walaalkaana Jecloow.
Sideedaba nolosha aad argtaan waa halgan aad ku jirto ha noqto mid aad ku fowstid iyo mid aad kuu kuftidba, balse aad isdaba qaban kartid hadii Ilaah kugu toosiyo ama aad heshid wax kuugu maciina wanaaga.
Tariikhiyan' maanta qof waliba ee wax garad ah wax waa ooga bilaaban yahiin ma dhamaatada taariikhda colaadeed, laakiin xaqiiqda waxa eey tahay ayaan la isku raacsaneeyn, ma aha in uu muran ka taagan yahay oo fikrado la isku diidan yahay oo la isku mari waayay, ileeyn dood baa furanee; ee Indhaha ayaa dad badan u xirteen, sacabada dhagaha ayeey saarteen taasoo lagu sifeeyn karo kibir jahli iyo naceeyb aan dhamaaneen.
Wax kastaba bilow iyo dhamaad beey leeyahiin balse kibir iyo jaahilnimo ma dhamaadaan ilaa qabiri un baad lagalin, iyo xisaabta ILLAAHII subxaanuhu wa tacaalaa.
Dadka noocaas ah oo ka qadsan aragtid maqalka iyo muuqaalka leh oo eey hantisay PUNTLAND in eey maanta maseeraan xanaaqaan iyo caaytamaanba wax nagu cusub ma aha ee waanu sugeeynay, wakhtigii caayda la isku adeegsan jiray SORRY waa la soo dhaafay haatan waa xilgii FACTS maqal iyo muqaal.